Famokarana metaly nameplates tsara indrindra & mpanamboatra Metal Nameplates manokana | Alice
Mpanamboatra izay manome serivisy label-kalitao avo lenta
Ny mpanjifa avy amin'ny UAE Custom dia nahavita 50000pcs aluminum alloy anarana ho an'i Etazonia-Alice
Mpanjifa iray avy amin'ny Emirà Arabo Mitambatra namboarina 50.000 PCS Aluminum Alloy anarana ho antsika. Nifandray taminay ny mpanjifa ary nanome anay ny sary famolavolana ny anarany, ary nahavita ny porofo santionany ny namesseplate tao anatin'ny herinandro araka ny sarin'ny mpanjifa. Alloy Nameplate dia novokarina. Misaotra ny mpanjifa noho ny fanohanany sy ny fahatokisan'izy ireo.
Inona no tokony hatao raha toa ny mavo-Alice
Inona no tokony hataoko raha mihodina mavo ny fanalavoana faux? Ireto misy fomba vitsivitsy hanampiana anao.1. Bleach miaraka amin'ny fumigation solifara. Scrub miaraka amin'ny borosy.2. Manangàna efitrano mifoka sigara ao an-trano.3. Mpanamboatra Lampshade matihanina. Amin'ny ankapobeny, ny Lampshade dia manana menaka manokana izay azo diovina. Azonao atao ny mividy mivantana avy amin'ny mpanamboatra izay novidinao!
Mpanjifa iray avy any Alemaina izay nanamboatra ny Audio PCS mihoatra ny 60 000 PC
Mpanjifa iray avy any Alemaina izay namoaka audio dia nanamboatra ny aluminium aluminium mihoatra ny 60,000. Ankehitriny, ny anaran'ny mpanjifa dia nizara ho an'i Alemana tamin'ny batch. Ity no fotoana faharoa ho an'ny mpanjifa Alemanina hiara-miasa amintsika. Misaotra anao noho ny fanohananao sy ny fahatokisanao.
Ahoana ny fomba hiatrehana ny mavo amin'ny lampashade plastika-alice
Ny fianakaviana tsirairay dia hametraka vokatra jiro isan-karazany. Mba hahatonga ny jiro dia misy fiantraikany tsara kokoa, voajanahary ny misafidy ny mametraka ny jiro, ary afaka miaro ny jiro amin'ny vovoka ihany koa izy io. Ny jiro dia mbola azo diovina. Misy karazany maro ny fitaovana ho an'ny jiro, ary ny jiro plastika dia iray ihany amin'izy ireo. Rehefa afaka fotoana ela dia mety ho hitan'ny olona fa mavo mavo, ka ahoana ny fomba hiatrehana ny mavo amin'ny jiro plastika?
Inona avy ireo fahaiza-manao mividy ny lampshade-Alice-Alice
Ho an'ny fividianana ny Lampshade boribory, dia toro-hevitra ny tsirairay fa ny olona rehetra dia mandinika tsara ny fividianana amin'ny tsena tsy tapaka, diniho tsara ny endrika sy ny haben'ny vokatra, ary safidio araka ny fomban'ny fianakaviana. Ny etsy ambony dia ny fampidirana ny fomba fametrahana ny jiro boribory sy ny fahaizan'ny fividianana ny lampshade boribory. Azonao atao ny misafidy ny lampshade habe mety arakaraka ny zavatra ilainao.
Ahoana ny fametrahana lampshade boring-Alice
Mandritra ny fametrahana ny lampshade boribory dia ampiasaina amin'ny fanamboarana ny banga ny fanitarana, ary ny isa sy ny haben'ny fanitarana dia voafaritra arakaraka ny fomba sy ny haben'ny jiro boribory boribory. Eo am-pamoloana ny fanoloana ny jiro miforitra, dia ilaina ny mahafantatra ny isa sy ny toerana manokana amin'ireo boka fanitarana ampiasaina, izay mety hanakana ny olana tsy ilaina amin'ny fanoloana ny jiro.
Ahoana ny fanesorana ny jiro mitambatra mitambatra ao Alice-Alice
Rehefa vita ny valin-drihana mitambatra dia ilaina ny miditra amin'ny haingo ny jiro an-trano. Ny jiro mitambatra mitambatra dia safidy iraisana. Avy eo, aorian'ny fametrahana ny valindrihana, raha misy lesoka, ahoana ny fanesorana ny alokaloka mitambatra?
Ahoana ny fomba fametrahana ny alokaloka ny valan-javamaniry mitambatra - Alice
1. Mametraka jiro mitambatra ao anaty trano ao anatiny, tsy maintsy misafidy toerana aloha ianao. Manoro hevitra ny hisafidy toerana iray miaraka amin'ny fantsona tsara.2. Zahao ny kalitaon'ny rindrina efitrano fandraisam-bahiny mba hisorohana ny fipoahana ny rindrina sy ny rindrina mandritra ny fametrahana ny hazavana mitambatra mitambatra.3. Zahao ny kalitaon'ny valan-javaboary izay hapetraka ny hazavana mitambatra. Raha tsapanao fa tsy azo antoka fa tsy azo antoka, dia atoroy ny mampiasa jiro vy vita amin'ny vy vy ho toy ny fepetra fiarovana amin'ny valin-kafatra.
Ahoana ny fomba handroahana ny lampshade sy ny valin-drihana-Alice
Ny jiro tsara dia mety ho lasa fanahin'ny haingon-trano an-trano, ary ny safidin'ny jiro dia lasa zava-dehibe amin'ny haingon-trano an-trano. Ny hevi-dehibe amin'ny fisafidianana hazavana misy hazavana dia ny hahitana raha mora ny mametraka sy manaisotra, ary tokony hodiovina koa izy io. Ao amin'ny dingana fanadiovana isan'andro dia hamonjy olana be dia be, ary tena mety ny manolo azy indray amin'ny ho avy.
Ahoana ny fomba hanokafana ny jiro mihodina ny jiro miforitra boribory
Ny jiro famoaham-bokatra boribory dia misokatra amin'ny ankapobeny amin'ny fanodinana ny lampshade; Ny karazana kianja amin'ny ankapobeny dia mampiasa buckle; Misy ihany koa ny fampitahana ny jiro fitaratra, izay miforitra amin'ny loharano telo ao anatiny, ary ny jiro dia tsy maintsy misintona mafy; Ny jiro sasany dia mipetaka ao anaty valindrihana, ary ny valin-drihana dia tsy maintsy esorina hanoloana azy. Atsipazo moramora ny jiro mba hahitana ny loharano, tsindrio ny iray amin'ireo loharano iray ary esory, ary esory ny loharano hafa.
Ahoana ny fanesorana ny jiro amin'ny valin-drihana-Alice
Ny jiro dia ny maso amin'ny fanaka. Ao an-trano haingon-trano, ny andraikitry ny jiro dia tsy voafetra ihany amin'ny jiro, fa ny anjara toeran'ny haingo koa.
Ahoana ny fomba hiatrehana ny lampshade mavo ao an-trano? -Alika
Rehefa mifidy jiro sy jiro, ny ankamaroan'ny fotoana, ny tsirairay dia hijery ny jiro lehibe aloha, fa ny jiro lehibe dia tsy azo ampiharina toy ny jiro kely. Na dia tsy dia be loatra ny jiro kely amin'ny lafiny faritra, ny fiantraikany amin'ny jiro dia mety kokoa noho izany dia ampiasaina ao an-trano, ary izao dia tsy ny jiro ihany no tsy nampitombo ny safidy fisehoana ho an'ny aesthetika, fa nanatsara ny saron-jiro ihany koa.